Teboka vavaka hanalana ny fanaintainana | TOKO VAVAKA
Home vavaka Teboka vavaka mba hanamaivanana ny fanaintainana
Androany isika dia hiatrika teboka vavaka hanamaivanana ny fanaintainana. Rehefa anontaniana ny maro dia mino ny fanaintainana raha tsy rehefa marary ianao na maharitra ratra. Betsaka ny olona tsy mahalala fa misy zavatra antsoina hoe fanaintainana ara-pihetseham-po, fanaintainana ara-tsaina ary fanaintainana ara-panahy. Rehefa maharitra ela loatra ao anatin'ny lehilahy ireo fanaintainana ireo dia mety ho kivy ny olona noho ny herin'Andriamanitra ary miahiahy raha toa ka ampy hanafoana ny fanaintainany Andriamanitra.
Ny fanaintainana dia endrika fakam-panahy ampiasain'ny fahavalo hanandramana antsika mpino. Ity fanaintainana ity dia mety ho vokatry ny fahaverezan'ny olona iray na zavatra iray tena ilaina na akaiky anao. Mety ho vokatry ny aretina tsy hiala, mety ho vokatry ny ratram-po. Na inona izany fanaintainana izany ary na inona na inona antony mahatonga izany fanaintainana izany, dia tsy maintsy fantatrao fa mahery Andriamanitra ary ampy hanasitrana karazana fanaintainana. Ny devoly dia nampijaly ny fiainan'i Joba tamin'ny fanaintainana mafy. Nandritra ny taona maro dia nibolisatra tamin'ny asan'ny poizina vokatry ny aretina sy ny fandavana olona i Job. Very ny zava-drehetra nangoniny ary saika tsy nanana afa-tsy fanaintainana mafy noho ny aretina tsy hiala izy.
Tonga tamin'ny fotoana izay nitenenan'ny vadin'i Joba azy hanozona an'Andriamanitra dia ho faty. Nino izy fa tsara kokoa noho ny miaina amin'ny fanaintainana mafy. Izany no mitranga rehefa mijaly mafy isika. Na dia mbola matanjaka aza ny finoantsika ny tompo dia olona maro manodidina antsika no tsy mitovy finoana aminy. Ho avy ny fotoana hanoroan'izy ireo hevitra hitady vahaolana any an-kafa. Adinon'izy ireo fa ilay Andriamanitra tompointsika dia Andriamanitry ny nofo rehetra ary tsy misy zavatra tsy hainy hatao araka ny nohazavaina ao amin'ny bokin'i Jeremia 32:27 «Izaho no Jehovah, Andriamanitry ny nofo rehetra; misy zavatra sarotra loatra amiko? ” Andriamanitra dia mahay manao mihoatra lavitra noho izay angatahintsika na heverintsika, araka ny hery miasa ao amintsika.
Tsy raharahako izay karazana fanaintainana mahazo anao, tsy tiako ho fantatra akory hoe inona no antony mahatonga ny fanaintainana, ny fantatro dia misy mpanasitrana lehibe ao Ziona afaka manamaivana ireo karazana fanaintainana rehetra. ary manasitrana aretina isan-karazany. Raha tsapanao fa ilaina ny mivavaka dia andao hiara-hivavaka.
Mpanasitrana lehibe any an-danitra, mino aho fa ilay Andriamanitra taloha, Ilay ankehitriny ary Ilay ho avy. Mahazo fampiononana aho fa lehibe sy mahery ianao ampy hanasitranana karazana aretina rehetra. Mivavaka aho fa amin'ny herin'ny tananao ankavanana dia hanamora izany fanaintainana amin'ny vatana izany ianao. Mivavaka aho mba hikasihan'ny herinao ny faritra rehetra amin'ny tenako izay mila kitihina ary hanafaka ahy amin'ny fijaliana noho izany fanaintainana izany eo amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy ianao.Jesosy Tompo ô, ny soratra masina dia nilaza fa nalain'i Kristy teo Aminy ny aretintsika rehetra ary nositraniny ny aretintsika rehetra. Mivavaka amin'ny herin'ny anaran'i Jesosy aho, ny fanaintainana rehetra ao am-poko sy ao an-tsaiko dia esorina amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fampijaliana rehetra ato am-poko dia potehina amin'ny anaran'i Jesosy. Mangataka aho mba hahita ahy ny fampiononan'Andriamanitra Tsitoha anio ary hanaisotra ny karazana fanaintainana rehetra ao am-poko amin'ny anaran'i Jesosy.Tompoko, ianao no manasitrana ny fo torotoro, ianao no manamboatra ny faritra tapaka rehetra. Avelao ny tara-pahazavanao hiditra ao amin'ny maizin'ny fahoriako. Mivavaka aho mba hanesoranao izao fanaintainana izao ary hanome ahy fiadanan-tsaina. Mangataka aho amin'ny famindram-ponao, hampianarinao ahy hiatrika an'izany fanaintainana izany aho. Raha tokony hijerena alahelo aho dia mivavaka mba hampianarinao ahy ny fitiavanao. Ampahafantaro ahy fa tianao sy ankafizinao aho amin'ny anaran'i Jesosy.Tompoko, mandà tsy ho kivy aho na ho reraka amin'izany fanaintainana izany. Mivavaka aho mba hisehoanao amin-kery amin'ity tranga ity amin'ny anaran'i Jesosy. Mivavaka aho amin'ny herinao mba hanesoranao izany fanaintainana ato am-poko izany ary hanome ahy fiadanam-po amin'ny anaran'i Jesosy. Tompoko, ny fanaintainana rehetra ateraky ny aretina. Hoy ny soratra masina tamin'ny dian-kapoka taminy: sitrana isika, mivavaka aho mba hositraninao amin'ny anaran'i Jesosy aho.Jesosy Tompo ô, mivavaka aho mba hanampianao ny tsy mino ahy rehefa mijery ny hazofijaliana aho mba ho sitrana. Mangataka ny fahasoavana ho mafy orina aho eo amin'ny toerako, satria fantatro fa ny fanaintainana sy ny alahelo ankehitriny dia tsy misy dikany raha oharina amin'ny voninahitra izay hivoatra tsy ho ela. Mivavaka aho mba homenao ahy ny fahasoavana hijoro miaraka aminao hatramin'ny farany. Mangataka aho ny famindram-ponao, ianao haneho famindram-po lehibe amiko, asehonao ahy ny famindram-ponao sy ny fahalehibiazanao amin'ny anaran'i Jesosy.Tompoko, milaza ny soratra masina fa ampy ahy ny fahasoavanao ary ny herinao dia tanterahina amin'ny fahalemeko. Jesosy Tompo ô, mivavaka aho mba ho ampy ho ahy ny fahasoavanao mandritra izao fotoam-pitsapana amin'ny anaran'i Jesosy izao. Mivavaka aho mba hanampian'ny herinao ny fahalemeko amin'ny anaran'i Jesosy.Tompo ô, misaotra anao aho mamaly ny vavako. Misaotra anao aho satria fantatro fa nesorinao izany fanaintainana izany. Misaotra anao aho satria fantatro fa tsy io fanaintainana io no ho hitako fandriampahalemana ary fitoniana, misaotra anao aho satria ampy ahy ny fahasoavanao. Misaotra anao aho satria efa nanasitrana ahy tamin'ny karazana fanaintainana ara-pihetseham-po, ara-tsaina ary ara-tsaina nampijaly ahy ianao, avelao hisandratra mandrakizay ny anaranao. Amena.
Jesosy Tompo ô, ny soratra masina dia nilaza fa nalain'i Kristy teo Aminy ny aretintsika rehetra ary nositraniny ny aretintsika rehetra. Mivavaka amin'ny herin'ny anaran'i Jesosy aho, ny fanaintainana rehetra ao am-poko sy ao an-tsaiko dia esorina amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fampijaliana rehetra ato am-poko dia potehina amin'ny anaran'i Jesosy. Mangataka aho mba hahita ahy ny fampiononan'Andriamanitra Tsitoha anio ary hanaisotra ny karazana fanaintainana rehetra ao am-poko amin'ny anaran'i Jesosy.Tompoko, ianao no manasitrana ny fo torotoro, ianao no manamboatra ny faritra tapaka rehetra. Avelao ny tara-pahazavanao hiditra ao amin'ny maizin'ny fahoriako. Mivavaka aho mba hanesoranao izao fanaintainana izao ary hanome ahy fiadanan-tsaina. Mangataka aho amin'ny famindram-ponao, hampianarinao ahy hiatrika an'izany fanaintainana izany aho. Raha tokony hijerena alahelo aho dia mivavaka mba hampianarinao ahy ny fitiavanao. Ampahafantaro ahy fa tianao sy ankafizinao aho amin'ny anaran'i Jesosy.Tompoko, mandà tsy ho kivy aho na ho reraka amin'izany fanaintainana izany. Mivavaka aho mba hisehoanao amin-kery amin'ity tranga ity amin'ny anaran'i Jesosy. Mivavaka aho amin'ny herinao mba hanesoranao izany fanaintainana ato am-poko izany ary hanome ahy fiadanam-po amin'ny anaran'i Jesosy. Tompoko, ny fanaintainana rehetra ateraky ny aretina. Hoy ny soratra masina tamin'ny dian-kapoka taminy: sitrana isika, mivavaka aho mba hositraninao amin'ny anaran'i Jesosy aho.Jesosy Tompo ô, mivavaka aho mba hanampianao ny tsy mino ahy rehefa mijery ny hazofijaliana aho mba ho sitrana. Mangataka ny fahasoavana ho mafy orina aho eo amin'ny toerako, satria fantatro fa ny fanaintainana sy ny alahelo ankehitriny dia tsy misy dikany raha oharina amin'ny voninahitra izay hivoatra tsy ho ela. Mivavaka aho mba homenao ahy ny fahasoavana hijoro miaraka aminao hatramin'ny farany. Mangataka aho ny famindram-ponao, ianao haneho famindram-po lehibe amiko, asehonao ahy ny famindram-ponao sy ny fahalehibiazanao amin'ny anaran'i Jesosy.Tompoko, milaza ny soratra masina fa ampy ahy ny fahasoavanao ary ny herinao dia tanterahina amin'ny fahalemeko. Jesosy Tompo ô, mivavaka aho mba ho ampy ho ahy ny fahasoavanao mandritra izao fotoam-pitsapana amin'ny anaran'i Jesosy izao. Mivavaka aho mba hanampian'ny herinao ny fahalemeko amin'ny anaran'i Jesosy.Tompo ô, misaotra anao aho mamaly ny vavako. Misaotra anao aho satria fantatro fa nesorinao izany fanaintainana izany. Misaotra anao aho satria fantatro fa tsy io fanaintainana io no ho hitako fandriampahalemana ary fitoniana, misaotra anao aho satria ampy ahy ny fahasoavanao. Misaotra anao aho satria efa nanasitrana ahy tamin'ny karazana fanaintainana ara-pihetseham-po, ara-tsaina ary ara-tsaina nampijaly ahy ianao, avelao hisandratra mandrakizay ny anaranao. Amena.
manamaivana ny fanaintainana
Previous lahatsoratraTeboka vavaka ho an'ny vady matahotra an'Andriamanitra
Next lahatsoratraTeboka vavaka hanoherana ny lesoka amin'ny minisitra
Zeferino Manuel Paulo 2 Jolay 2021 Amin'ny 3:51 hariva
40 Vavaka mba hahombiazana amin'ny fiainana
40 Vavaky ny famonjena amin'ny fanemorana ny fanambadiana
Novambra 16, 2018
30 Hivavaka mba handringanana ny fanahiny